चिलिमेको नाफा साढे ५२ करोड -
चिलिमेको नाफा साढे ५२ करोड
६ असार २०७७, शनिबार १४:०२ । रसुवा
चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिकमा ५२ करोड ५६ लाख रुपैया नाफा कमाएको वितिय विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।
नाफा गतवर्षको भन्दा ३ दशमलव ३ प्रतिशतले थोरै हो । गतवर्ष यस कम्पनीले ५४ करोड ३६ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । कम्पनीले उत्पादन गरेको विजुली नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सबै खरिद नगरेका कारण्ण नाफा प्रभावित भएको चिलिमेको दावी रहेको छ । यस अवधिमा प्राविधिकरण ले न्युन मात्र विद्युत खरिद गर्दा नाफा प्रभावित भएको कम्पनीको भनाई रहेको छ ।
चिलिमेले अधिक विद्युत उत्पादन गरेको तथा प्राधिकरणले भने पुर्व सम्झौता अनुसारको मात्र विजुली खरिद गरेको कम्पनीले जनाएकोछ । चिलिमेको विद्युत विक्रीबाट हुने आम्दानी पनि ८० कारोड ७५ लाख रुपैयाबाट थोरै घटेर ८० कारोड ७५ लाख रुपैयाबाट थोरै घटेर ८० करोड ३७ लाख रुपैयामा भरेको छ ।
यसैगरी कम्पनीले तिर्नुपर्ने करको मात्र पनि बढेको छ । चिलिमे ले यस अघि कार छुट पाउँथ्यो तर सन्चालनमा आएको १५ वर्ष पुरा भइसकेकाले तिर्नुपर्ने कर र रोयल्टी बढेको छ ।
हाइड्रोपावर कम्पनीलाई १५ वर्ष सम्म कर तथा रोयल्टीमा छुट दिइने प्रावधान छ । यो अवधि पुरा भएपछि कर र रोयल्टी दायित्व वृद्धी हुन जान्छ यसर्थ यसपटक चिलिमे ले कर बापत १३ करोड ८६ लाख रुपैया खर्च गरेको छ । गत वर्ष यही शीर्षकमा जम्मा ११ करोड ६७ लाख रुपैया मात्र खर्च थियो । हाल यस कम्पनीको सेयर पुजी ५ अर्व ७० करोड ९७ लाख रुपैया रहेको छ ।
यस्तै कम्पनीले रिटेन्टअर्निङ शीर्षकमा चार अर्व सात करोड २७ लाख रुपैया छुटाइएको छ । चिलिमे को प्रति सेयर आम्दानी पनि दुई रुपैया २७ पैसामा झरेको छ । गत वर्ष प्रति सेयर आम्दानी १५ रुपैया २३ पैसा थियो यसको प्रति शेयर नेटवर्थ एकसय ७१ रुपैया ३३ पैसा रहेको छ ।
शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्न सुझाव
कैलालीका सुनचाँदी व्यवसायमा निर्भर मजदूर संकटमा
सुनको मुल्य वृद्धि
एक खर्ब ८५ अर्ब बढीका सात परयिोजना स्वीकृत
जरिवानावापत दुई करोड राजश्व संकलन
१. अपराध नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याउनेलाई सम्मान
२. अब यसरी गर्नुस् सुरक्षित हवाईयात्रा……
३. फुल्पिङमा पहिरोले दुई घर बगायो, पाँच बेपत्ता
४. सशस्त्र प्रहरीसँग आफ्नो भवन नहुँदा समस्या
५. यातायात व्यवसायी र मजदूरका समस्या समाधान गर्न राहतको व्यवस्था गर्नुपर्छः अध्यक्ष प्रचण्ड
६. मनास्लु यात्राका पलहरू
न्यून मध्यम आय मुलुकमा उक्लियो नेपाल